ओमकार टाइम्स यस कारण बग्छ महिलामा सेतो पानी, योनिमा हुने संक्रमणबाट कसरी बच्ने ? – OMKARTIMES
यस कारण बग्छ महिलामा सेतो पानी, योनिमा हुने संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?
महिलामा सेतो पानी बग्ने कारण दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा प्याथोलोजी र अर्को फिजियोलोजिकल । प्याथोलोजिकल भनेको शरीरमा लाग्ने अन्य रोगका कारण हुने हो ।
फिजियोलोजिकल भनेको शरीरमा कुनै रोग नलागी हुने समस्या हो । हाम्रो शरीरमा दुई किसिमका ग्रन्थि हुन्छन् । ती ग्रन्थिबाट पानी निस्कन्छ । महिनावारी हुनुभन्दा पाँच दिनअगाडि र महिनावारी भएको १४ दिनमा धेरै पानी बग्ने समस्या आउँछ ।
५० वर्षभन्दा माथिका महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या देखिएको हुन्छ । यो उमेर समूहका महिलामा पाठेघरमा हुने जुनसुकै क्यान्सर लागेको खण्डमा पनि पानी बग्ने समस्या हुन सक्छ । यस्तो महिलामा थोरै पानी बग्ने, तर एकदमै गनाउने पानी बग्ने हुन्छ ।
यो उमेरका महिलामा बिस्तारै हर्मोनको कमी हुँदै जान्छ । शरीरमा हुने हर्मोनको कमीका कारण पनि महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या आउँछ । योनि र पाठेघरमा हुने संक्रमणले महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या हुन्छ । चार किसिमले महिलाको योनिमा संक्रमण हुन्छ ।
योनिमा हुने संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?
-दिनदिनै योनि सफा गर्नुपर्छ ।
-योनिलाई सफा पानीले धुनुपर्छ । साबुनले धुँदा योनि सुक्खा हुन्छ र चिलाउने हुन्छ ।
-विवाहित महिलामा योनिमा संक्रमण भए श्रीमान्–श्रीमती दुवैजना अस्पताल जानुपर्छ । यदि एकजना मात्र अस्पताल जाँदा फेरि पनि रोग सर्ने समस्या हुन सक्छ ।
-हरेक दिन अन्डरवेयर चेन्ज गर्नुपर्छ ।